Axmed Ciise Guutaale: Xildhibaan Mahad Salaad ma hadlaa weli? – Kalfadhi
Nin ayaa laga sheegay maanta oo aan talo hayo tabar ma hayo, shalay oo aan tabar hayeyna talo ma hayn! Maalmahaan waxa aan ku arkaa Facebook Xildhibaan Mahad ayaa dhallinyaro la kulmay! Xildhibaan Mahad ayaa dhallinyarada beesha la qaatay kulan wadatashi iyo iswareysi ah iyo sidoo kale xildhibaanka ayaa xog wareysi la qaatay dhallinyarada!
Waxaa iga yaabiyey ayaa ah in xildhibaanku, isaga oo aan hal marna ka cudur daaran dagaalkii uu qaybta ka ahaa ee deegaanka uu metelo kadhacay, uu weli soo taaganyahay, sidii uu dagaalkaas u dhacayna uusan maalinna tegin gobolkii! Waxaa kale oo amakaag ah in uu hadda u qalab qaadanayo bal inuu sii meteli karo.
Xildhibaan adiga oo Wasiir iyo xildhibaan isku ah wiixi ay hallaysay xukuumaddii aad kamidka ahayd, welibana awood fiican ku lahayd, maanta waa xallin kartaa ee geedaha ha isku aaddinee, tag gobolkii dadkiina haddii aadan wax kale u tari karin u soo cudur daaro!